ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: ကျွန်တော်ဘာတွေပြောခဲ့သလဲ ...
အောက်မှာရေးထားတာတွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဆီမီနာမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေး တွေရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ပါ ...
ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ဟောပြောပွဲလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း why do we blog … ? ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ် …။ ကျွန်တော်တို့ဘာ့ကြောင့် ဘလော့ဂ်ရေးကြသလဲပေါ့ …။ ကျွန်တော်တို့ ဘာ့ကြောင့် ဘလော့ဂ်ရေးကြသလဲဆို တာကို နောက်ပြောမယ့် ဘလော့ဂါညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက မပြောခင်မှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ … ဘလော့ဂ်ဆိုတာဘာလဲ …၊ ဘလော့တွေ ဘယ်လိုစဖြစ်လာသလဲ … ဆိုတဲ့ တော့ပစ်လေးတွေကို တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် …။
ဒါကတော့ Wikipedia မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ရဲ့ အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးပါ …။
ဘလော့ဂ်ဆိုတာ ၀ပ်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ ဒါပေမယ့် သူ့အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ စာတွေပုံတွေ၊ အမြဲတမ်း ထပ်ထပ်တင်နေတာတွေ chronological order အရ တင်ထားတဲ့ ၀ပ်ဘ်ဆိုဒ်တွေကိုပဲ နောက်ထပ်နာမည်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပေးလိုက်တာပါ …။ ဘလော့ဂ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို verb (ကြိယာ) တစ်ခုအနေနဲ့လဲ သုံးလို့ရပါတယ်။
Blog = Aawebsite where entries are written in chronological order
Blogging = To write entries in, add material to, or maintainaweblog.
ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ သမိုင်းကိုလိုက်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဂျပ်စတင်ဟော(Justin Hall) ဆိုတဲ့သူက ဆွက်မိုးကောလိပ် (Swarthmore College) မှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် စာပေသင်ယူနေစဉ် ၁၉၉၄ခုနှစ်မှာပဲ Justin's Links from the Underground လို့အမည်ရတဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ် www.links.net ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်တွေအရတော့ သူ့ကို မျက်မှောက်ခေတ်ဘလော့ဂါ (Blogger) တွေရဲ့ ဘိုးအေလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ ၂၀၀၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် နယူးယောက်တိုင်း မဂ္ဂဇင်း ကလည်း သူ့ကို ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွေရဲ့တည်ထောင်သူ the founding father of personal blogging အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ chronological order နဲ့ လုပ်ကြတဲ့ ၀ပ်ဘ်ဆိုဒ်တွေပေါ်လာကြပြီး … Logging the Web ဆိုတဲ့စကားခေတ်စားလာပါတယ်။ ၀ပ်ဘ်ဆိုဒ်တွေထဲကို အစဉ်လိုက်စီတန်းထည့်ခြင်းပေါ့ဗျာ …။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂ် Blog ဆိုတဲ့ စကားလုံးဖြစ်လာစေတဲ့ web ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ log ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့သူကတော့ ဒီလူပါ …။ ဂျွန်ဘာဂါ (Jorn Barger) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဂျွန်ဘာဂါက weblog ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွဲအဆက်ကို ၁၉၉၇ ဒီဇင်ဘာလမှာပဲ robot wisdom weblogs လို့အမည်ရတဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ် www.robotwisdom.com ထဲမှာ ချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပါ …။ Weblog ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ the Oxford English Dictionary မှာ အမှန်တကယ်တရားဝင် ပါဝင်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၃ခုနှစ် မတ်လမှဖြစ်ပါတယ်။ "weblog" "weblogging" “weblogger” ဆိုပြီး verb အနေနဲ့ပါဝင်လာခဲ့တာပါ။
၁၉၉၉ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတော့ Peter Merholz ဆိုတဲ့သူက Weblog ဆိုတဲ့စကားလုံးကို we blog လို့ခွဲချလိုက်ပြီး BLog ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာတော့ Merriam-Webster's Dictionary က blog ဆိုတဲ့စကားလုံးကို the word of the year in 2004 အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းမျဉ်း ဒီလိုမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ် ...။
website ------ loggingthe web
logging the web ------ weblog
weblog ------ we blog
we blog ------ blog
ဘလော့ဂ် (Blog) တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ လူသားတွေအားလုံးဆီကို အလွန်လျှင်မြန်တဲ့နှုံးနဲ့ ရောက်ရှိသတင်းပေး နိုင်တဲ့အပြင်၊ ဘလော့ဂ်ရေးသူနဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူတွေ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့လဲရနေတာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ blogosphere လို့ခေါ်တဲ့ ဘလော့ဂ်လောကဟာ အင်တာနက်နဲ့အကျွမ်းတ၀င်ရှိကြတဲ့လူတန်းစားအားလုံးရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်၊ အယူအဆ၊ ခံစားချက်တွေဖလှယ်ရာ စကားဝိုင်း ( forum) တစ်ခုအသွင်ဆောင်လာပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် (World Trade Center) အကြမ်းဖက်မှုအပြီးမှာဆိုရင် ဒီအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ထင်မြင် ယူဆချက်တွေ၊ တွေ့ကြုံခံစားရမှုတွေကို ဆက်သွယ်ဖလှယ်ကြတဲ့နေရာမှာ ဘလော့ဂ်တွေဟာ အခြားသောနည်းလမ်းဟောင်းတွေထက် ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်တာကြောင့် အဓိကအနေနဲ့ အသုံးပြုခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အီရတ်စစ်ပွဲဟာဆိုရင်လဲ တနည်းအားဖြင့် ဘလော့ဂ်စစ်ပွဲတစ်ခုလို့ဆိုရလောက်အောင်ကို ဘဂ္ဂဒက်မှာရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ဘလော့ဂ်တွေဟာ များစွာသောဖတ်ရှုသူတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ စလမ်ပက်ရှ် (Salam Pax) ဆိုသူဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ဘလော့ဂ်ဖြစ်တဲ့ dear_raed.blogspot.com ကို စာအုပ်အဖြစ်တောင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ၀ပ်ဘ်ဆိုဒ်တွေကိုကျော်ပြီး ဘလော့ဂ်တွေခေတ်စားလာတာ သိသိသာသာပါပဲ …။ နောက်ပြီး ဘလော့ဂါတွေလဲ သိသိသာသာကိုများလာပါတယ် … ဒါဟာ ခေတ်ကတောင်းဆိုလို့ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ …။ ခုနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ websiteတွေကိုကျော်ပြီး ခေတ်စားလာတာကတော့ Web log (Blog) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Website တစ်ခု တည်ဆောက်ရတာလောက်အလုပ်လဲမများ၊ ပိုက်ဆံလဲမကုန်တဲ့အတွက် အခုနောက်ပိုင်းမှာ(Blog)အရေအတွက်ဟာ သိသိသာသာကြီးကို တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။(Blog) တွေကို အသုံးများလာရခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူ အဆင်ပြေလွန်းတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Domain Name တွေ web host တွေအတွက်လဲ free service ပေးနေတဲ့ ဆိုဒ်တွေရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီလိုပြောလို့ ဘလော့ဂ်တွေအားလုံးဟား အလကားယူပြီးတော့ပဲ လုပ်ကြတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ….။
Nir Ofir ဆိုတဲ့သူက ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာစပြီး ဘလော့ဂ်ဒေးကို သတ်မှတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် …။
ဒါကတော့ ဘလော့ဂ်ဒေးမှာ လုပ်ဖို့ပြောထားတဲ့ အလေ့အထလေးတွေပါ။ ဒါတွေလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘလော့ဂါအသစ်တွေတိုးပွားစေနိုင် တဲ့ အတွက် ဒီအလေ့အထလေးကို ကျွန်တော်တို့ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်သွားသင့်ပါတယ် ...။
အခုလောလောဆယ်တော့ ဒီနေ့ကို ဘလော့ဂ်ဒေးလို့ခေါ်နိုင်ပေမယ့် ဝေါဘလော့ဂ်ဒေးလို့တော့ ခေါ်လို့မရသေးပါဘူး။ တစ်နေ့နေ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိကြတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေအားလုံးက သူရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို မငြင်းပယ်တော့ပဲ လက်ခံလိုက်ကြပြီဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ဟာ ဝေါဘလော့ဂ်ဒေးဖြစ်လာမှာပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ စုံသလောက်ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ် …။ ထပ်မံလေ့လာစရာ တွေကတော့ အများကြီးပါ …။ ဘလော့ဂ်လုပ်တယ်ဆိုတာဟာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေခြင်းသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာတွေပါသလို၊ အနုပညာတွေလဲ စိမ့်ဝင်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အဆင့်အတန်းတစ်ခု နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ၊ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူတွေ အပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Society (လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခု) ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခု ဒီပွဲလေးကို ၀ိုင်းဝန်းစီစဉ်ကြတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေအားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ အားလုံးကို ခေတ်နဲ့မျက်ခြေမပျက်စေချင်တာပါ …။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကိုပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလုံးလေးတစ်ခု ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ living fossil မဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ …။ living fossil ဆိုတာ … အခုလက်ရှိအသက်ရှင်နေပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မျိုးစိတ်တွေက ရှေးခေတ်က မျိုးစိတ်တွေနဲ့သွားတူနေတဲ့ သက်ရှိတွေကိုဆိုလိုတာပါ…။ သူဆိုလိုတာက အသက်ရှင်နေရက်နဲ့ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ကျန်နေခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက် မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပါ …။ အဲဒီ့လိုလူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ် …။ ကျွန်တော်က မသိတဲ့သူတွေကို မသိရကောင်းလားဆိုပြီး အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းက သိခြင်းနဲ့ မသိခြင်းကို ခြားထားတဲ့အလွှာက တကယ့်ကိုပါးပါးလေးပါ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲ living fossil တစ်ကောင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသလို … နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပုခုံးလွှဲယူကြမယ့် လူငယ်ထုကြီးတစ်ရပ်လုံးကိုလဲ … living fossil တွေဖြစ်မနေအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ဟောပြောမှုကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ …။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် …။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, September 05, 2007
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း.. နောက်ဆုံးနိဂုံးလေး ကြိုက်တယ်ဗျို့
မြန်မာ့ဘလော့ဂါတွေ ဆီမီနာမှာ ပြောသွားကြတာလေးတွေကို လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဗဟုသုတရစရာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘလော့ဂ် ဘိုးအေကို အခုမှ သိရတယ်။ မြန်မာ ဘလော့ဂ် ဘိုးအေကတော့ ကိုညီလင်းဆက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။